RASMI: Barcelona Oo Dhamaystirtay Saxiixa Difaaacii Kooxda Sevilla Ee Clement Lenglet Iyo Jadwalka Saxaafada Loogu Soo Bandhigi Doono Oo La Shaaciyay. – GOOL24.NET
RASMI: Barcelona Oo Dhamaystirtay Saxiixa Difaaacii Kooxda Sevilla Ee Clement Lenglet Iyo Jadwalka Saxaafada Loogu Soo Bandhigi Doono Oo La Shaaciyay.
July 12, 2018 Cabdi Yare
Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay difaacii kooxda Sevilla ee Clement Lenglet, waxayna Barca bixisay lacagtii lagu burburin karayay heshiiska 23 sano jirkan ree France. Sidii aanu shalay idiin soo gudbinay Barcelona ayaa lacagta gaysay xafiiska maamulka La Liga kuwaas oo kooxda Sevilla ku war galiyay in lacagtii Clement loo hayo oo ay xidigan u fasixi karaan Camp Nou.
Barcelona ayaa kula soo saxiixatay daafaca reer France Clement Lenglet aduun dhan 35.9 million euros, ee ahaa qiimaha lagu kansalay heshiiskiisa, xili kooxda Sevilla ay iska diiday in wada hadalo ay la gasho Barca isbuucyadii lasoo dhaafay.
Blaugrana ayaa war rasmi ah ay soo saartay waxay ku xaqiijisay in ay bixisay qiimaha lagu kansalay heshiiska Clement Lenglet uu kula jiray kooxda Sevilla, wuxuuna laacibka u saxiixi doonaa heshiis 5 sano ah ee gaarsiisan ilaa iyo 30-ka bisha Juun 2023. Heshiiska Clement Lenglet ayaa lagu burburin karaa 300 milyan euros.
War rasmi ah oo ay Barca soo saartay ayaa lagu yidhi: ” Kooxda kubbada cagta Barcelona waxay bixisay lacagtii lagu burburin karayay heshiiska Clément Lenglet kaas aan hadda ahayn ciyaartoy Sevilla ah. Qiimihisu waa 35.9 milan euros. Ciyaartoygu waxa uu kooxda u saxiixi doonaa shan xili ciyaareed oo ah ilaa June 30,2023 waxaana heshiiskiisa lagu burburin karaa 300 milyan euros.
Warka kasoo baxay kooxda Barcelona ayaa waxaa intaas lagu sii daray in 23 jirka reer France ee Clement Lenglet uu k mid yahay daafacyada ugu xiisaha badan kubada cagta Yurub iyo caalamka xiligan la joogo, wxuuna xulkiisa farance u ciyaaray 10 kulan ee caalami ah ilaa iyo haatan.
kooxda Sevilla ayaa kula soo saxiixatay difaacan birta ah ee Clement Lenglet sanadii 2015 aduun lacageed gaaraya 5 million euros, wuxuuna ilaa iyo haatan kasoo muuqday 37 kulan ee ah dhamaan tartamada kala duwan isagoo dhaliyay 4 gool.
Jadwalka Barcelona ku soo bandhigayso Saxiixa Cusub ee Clement Lenglet:
Khamiista, 12 July (Waqtigu waa CET)
8.00pm, Sawiro ayaa Camp Nou looga qaaday
Jimcaha, 13 July
12.45pm, Saxiixa heshiiskiisa
1.15pm, Soo badhigsita Camp Nou oo buuxda
1.45pm, Sawiro dheeraad ah oo Camp Nou looga qaadi doono
2.15pm, Shirkiisa jaraa’id ee ugu horeeya isaga oo ciyaartoy Barcelona ah